Ogaden News Agency (ONA) – Isra’iil oo Sacuudiga Ka Caawinaysa La Dagaalanka Iiraan.
Isra’iil oo Sacuudiga Ka Caawinaysa La Dagaalanka Iiraan.
Posted by ONA Admin	/ November 18, 2017
Abaanduulaha Ciidamada Isra’iil (Yuhuuda) General Gadi Eisenkot ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay in Ciidanka Isra’iil ay diyaar u yihiin inay xogta iyo sirta la qaybsadaan Boqortooyada Sacuudiga si looga hortago khatarta Dowlada IRAN.
Wareysigan oo Khamiistii lagu daabacay jaraa’idka Sacuudiga laga leeyahay ee Elaph oo xaruntiisu tahay magaalada London. Hadalkan ayaa ah mid kusoo beegmaya xili Sacuudiga uu wado olole ka dhan ah wadanka Iran, isla markaana xiisadi ay ka taagan tahay dalka Libnaan.
Inkastoo Yuhuuda iyo Sacuudiga aysan lahayn wax xidhiidh diblumaasiyadeed ah, hadana Israel ayaa khatar u aragta kooxda Xisbullah ee ku sugan dalka Libnaan oo taageero ka hesha wadanka Iran. Yuhuuda ayaa bilihii lasoo dhaafay waday olole dhankooda ay doonayaan inay kusoo jiitaan Boqortooyada Sacuudiga, iyagoo sheegaya inay diyaar u yihiin inay iska kaashadaan la dagaalanka Iran.
Bishii June ayaa Yisrael Katz oo ah Madaxa Sirdoonka Israel ayaa Wasiir ka codsaday Boqorka Sacuudiga inuu casumaad u fidiyo Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu inuu soo booqdo magaalada Riyaad si ay u sameystaan xidhiidh toos ah labada dowladood, wallow codsigaasi uusan ka jawaabin Boqorka Sacuudiga.